नेपाली सेनाले भित्र्यायो नयाँ विमान, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण | suryakhabar.com
समृद्ध मुलुक बनाउन हरेक नागरिक शिक्षित हुनुपर्छः नेता भण्डारी
डा. भट्टराईको ठोकुवा : नेकपा आरालो लागेकाले अवको वैकल्पिक शक्ति समाजवादी
संग्रौंलाको प्रश्नः अपराधी गोकुल त जेल जान्छन् तर भक्त बचाउन भ्रष्टाचार लुकाउने ओलीलाई के हुन्छ ?
Home पु.समाचार समाचार नेपाली सेनाले भित्र्यायो नयाँ विमान, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण
नेपाली सेनाले भित्र्यायो नयाँ विमान, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण
on: १६ कार्तिक २०७६, शनिबार १३:०३ In: समाचारTags: No Comments
काठमाण्डौ । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा एक नयाँ विमान थपिएको छ । नेपाली सेनाले इण्डोनेशियासँग खरीद गरेको ‘मिडियम फिक्सविङ’ को नयाँ विमान आज त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । सो कार्गो विमान खरीदका लागि सन् २०१७ अगष्टमा एलसी खोलिएको थियो ।
विपद्का समयमा सामान ढुवानी र यात्रु ओसारपसार तथा सैनिक प्यारा तालीमका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विमान खरीद गरिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए । जम्मा ५१ यात्रु सिट क्षमताको उक्त विमानले प्यारा तालीममा रहेका ३५ सैनिकलाई एकैपटक बोक्न सक्छ ।
कासा विमान कम्पनीबाट उत्पादित सो विमानले पहिलो उडान सन् १९८३ नोभेम्बर ११ मा गरेको थियो । उक्त कम्पनीका विमान सबैभन्दा धेरै प्रयोग टर्की फ्रान्स, मलेसियालगायत मुलुकले गर्दै आएका छन् । कल साइन सिएन २३५–२०० विमान नेपाली सेनाले तीन करोड अमेरिकी डलरमा खरीद गरेको हो । यो विमानसहित नेपाली सेनासँग अब विमान र हेलिकप्टरको सङ्ख्या गरी २० पुगेको छ ।
त्यसैगरी अर्को वर्ष एक थान जहाज आउनेछ भने सन् २०२१ मा एयर एम्बुलेन्स अमेरिकाबाट प्राप्त हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ । मुलुकको आन्तरिक उडानका लागि अहिले १० हेलिकप्टर कम्पनीसहित २० वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । नेपालबाट तीन स्वदेशीसहित ३० वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन् ।
रुपनीमा बस र ट्रक ठोक्किँदा एकको मृत्यु, २० जना घाइते
नेता रावल आफ्नै सरकारसँग फयरः बिदेशीको लगानीमा राष्ट्रपति जोडिनु असंबैधानिक र अनैतिक
सवारी दुर्घटनामा महिलाको मृत्यु
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १५:२७
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १४:५५
भ्रष्टाचार र महङ्गी अन्त्य गर्न नेपालका लागि नेपाली अभियान्ताको माग
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १४:२६
सडक निर्माण मात्र विकास होइन : मन्त्री बस्नेत
ट्र्याक्टरको ठक्करबाट मृत्यु
निर्देशक नारायण रायमाझीको ‘परदेशी २’ को शुभमुहूर्त सम्पन्न
भ्रष्टचारले ९९.९९ प्रतिशत सीमा नाघ्न लागेपछि ७० करोडको अडियो बाहिर ल्याएको हुँः मिश्र
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:४०
गायक सुरज कलाखेतिको विलकुलै नयाँ गित ‘के जादु छ’ (भिडियो सहित)
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १७:४९
क्रिकेटप्रेमिका ढुक्ढुकि सन्दिप लामिछानेद्वारा धुर्मुस-सुन्तलिलाई ७० हजार सहयोग
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १६:०२
प्रचण्ड राजनीतिक उचाईमा, नातिनी गीत संगीतमा व्यस्त
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार ०७:१६
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार ०७:३४
१६ कार्तिक २०७६, शनिबार १३:०३